၂၀၁၂ ခုနှစ် လယ်ယာမြေဥပဒေ၊နည်းဥပဒေများနှင့် အညီ လယ်ယာမြေလုပ်ကိုင်ခွင့် ပြုလက်မှတ် ပုံစံ (၇) များကို မှန်ကုန်ပြည့်စုံစွာရရှိရန် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရမှ ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရေးအဆို တိုင်းလွှတ်တော်အတည်ပြု - Open Hluttaw
၂၀၁၂ ခုနှစ် လယ်ယာမြေဥပဒေ၊နည်းဥပဒေများနှင့် အညီ လယ်ယာမြေလုပ်ကိုင်ခွင့် ပြုလက်မှတ် ပုံစံ (၇) များကို မှန်ကုန်ပြည့်စုံစွာရရှိရန် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရမှ ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရေးအဆို တိုင်းလွှတ်တော်အတည်ပြု
၂၀၁၂ ခုနှစ် လယ်ယာမြေဥပဒေ၊နည်းဥပဒေများနှင့် အညီ လယ်ယာမြေလုပ်ကိုင်ခွင့် ပြုလက်မှတ် ပုံစံ (၇) များကို မှန်ကုန်ပြည့်စုံစွာရရှိရန် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရမှ ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရေးအဆိုကို ဧပြီ ၂ ရက်ကကျင်းပသည့် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်အစည်းအဝေတွင်အတည်ပြုခဲ့သည်။
ယင်းအဆိုကို အမရပူရမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၂) လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးမြင့်ဆွေက မတ် ၂၃ ရက်က ကျင်းပသည့်လွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွင် တင်သွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
This entry was posted in GeneralChooseahluttaw sessionHluttaw NewsChooseahluttaw sessionRegion/State HluttawChooseahluttaw sessionUncategorizedChooseahluttaw sessionBill updates. Bookmark the permalink.
← ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌသစ်အဖြစ် ဦးတီခွန်မြတ်အား ရွေးချယ်တင်မြှောက်
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတွင် တရားဝင် ဆေးကုသခွင့် လိုင်စင်မရှိဘဲဆေးဝါးကုသလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေသူများအား စစ်ဆေးကြပ်မတ်အရေးယူရန် တိုက်တွန်းသည့်အဆို မန္တလေးတိုင်းလွှတ်တော်တွင် ရှုံးနိမ့် →